Ukususwa kweCatheter yeFoley
I-catheter yakho yeFoley isuswe kuba awusayi kuyidinga. Unokuba neempawu ezithile zomchamo ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-48 emva kokuba ikhefu lakho leFoley lisuswe. Oku kubandakanya ukungxamiseka komchamo kunye nokuhamba rhoqo. Ukungxamiseka komchamo kuthetha ukuba uziva unesidingo esinamandla sokuchama kangangokuba unengxaki yokulinda. Unokuziva ungonwabanga kwisinyi sakho. Ukuhamba rhoqo kwi-Urinary kuthetha ukuba kufuneka uchame amaxesha amaninzi emini. Unokuba nentlungu xa uchama, okanye isinyi sakho singabinanto xa uchama.
Fowunela ugqirha okanye ugqirha ukuba:
Awuchami kwaphela ngaphakathi kweeyure eziyi-8 zokususwa kwekathetha.
Unemeko engxamisekileyo yokuchama, ukuphindaphinda, okanye ingxaki yokuchama ngaphezulu kweeyure ezingama-48 emva kokuba ususwe nge-catheter.
Unentlungu ngelixa uchama, okanye uziva ngathi isinyi sakho asikhupheli ngokupheleleyo ngaphezulu kweeyure ezingama-48 emva kokususwa kwe-catheter.
Ubona igazi kumchamo wakho.
Isisu sakho sidumbile.
Amayeza okubulala iintsholongwane unokunikwa ukuba uqhaqho lomchamo.
Thatha iyeza lakho njengoko kuyalelwe. Nxibelelana nomboneleli wakho wezempilo ukuba ucinga ukuba amayeza akho akakancedi okanye ukuba uneziphumo ebezingalindelekanga. Mxelele ukuba ngaba awunalo naliphi na iyeza. Gcina uluhlu lwamayeza, iivithamini, kunye nemifuno oyithathayo. Faka izixa, kwaye nini kwaye kutheni uzithatha. Yiza noluhlu okanye iibhotile zeepilisi kutyelelo olulandelayo. Phatha uluhlu lwakho lwamayeza kwimeko kaxakeka.
Sela ulwelo njengoko kuyalelwe:
Unokucelwa ukuba usele ulwelo oluninzi emva kokususwa kwetafile yakho. Oku kuyakunceda ukukhupha iibhaktheriya ezinokwakha ngelixa usebenzisa i-catheter ye-Foley. Buza umboneleli wakho wezempilo ukuba ufanele ukusela kangakanani kwaye zeziphi izinto ezingamanzi ezilungele wena.
Landela kunye nogqirha wakho okanye urologist njengoko kuyalelwe:
Olu lwazi lungentla luncedo kwezemfundo kuphela. Akujoliswanga njenge ngcebiso yezonyango kwiimeko ezithile okanye unyango. Thetha nogqirha wakho, umongikazi okanye usokhemesti ngaphambi kokulandela nayiphi na irejimeni yonyango ukubona ukuba ikhuselekile kwaye iyasebenza na kuwe.
ezimhlophe okweqanda ip 109
Ngaba izihlaziyi zemisipha zinokwenza iintlungu zibe mandundu
zingaphi iipeni ze-toujeo ebhokisini
Umthamo we-benadryl wezinja
iqhuma elingaphezulu kwesisu
ukutya onokukutya ngesilonda